Home / स्वास्थ्य / डन्डीफोर र कालोपोतोले हैरान हुनुहुन्छ ? अब घरमै बसेर यसरी हटाउनुहोस, यस्ता छन डाक्टर बस्नेतका सुझाव (भिडियो )
डन्डीफोर र कालोपोतोले हैरान हुनुहुन्छ ? अब घरमै बसेर यसरी हटाउनुहोस, यस्ता छन डाक्टर बस्नेतका सुझाव (भिडियो ) 0
अनुहारमा देखिने प्रमुख छालाका समस्याहरुमा डन्डीफोर र कालोपोतो पर्दछन । डन्डीफोर र कालोपोतोले अनुहारलाई कुरुप मात्र बनाउदैन, मानिसको आत्मबिश्वास समेत घटाउछ । बजारमा डन्डीफोर र कालोपोतो हटाउने भन्दै अनेल खाले औषधी पनि पाइन्छन । छालाको ठोस समस्या नबुझी त्यस्ता औषधी प्रयोग गर्दा समस्या घट्नुको सट्टा झन बढ्ने खतरा हुन्छ । तसर्थ डन्डीफोर र कालोपोतोको समाधानका लागी छाला तथा यौन रोग बिशेषज्ञ डा. बिनम्र बस्नेतले निकै उपयोगी जानकारी दिएका छन । डन्डीफोर र कोलोपोतोको घरमै बसेर गर्न सकिने उपचारका बिधिहरु के–के हुन ?
कस्तो खाने कुराले डन्डीफोर बढाउने वा घटाउने गर्दछ ? डन्डीफोर र कालोपोतो आएपछी के गर्ने ? के नगर्ने ? औषधीहरु के–के छन र कसरी प्रयोग गर्ने ? लगायतका बिषयमा छाला तथा यौन रोग बिशेषज्ञ डा. बिनम्र बस्नेतले बिस्तृतमा जानकारी दिएका छन । डा. बस्नेतको यो अति उपयोगी जानकारी तलको भिडियोमा हेर्नुहोस